မြန်မာ ပရိုဂရမ် များ - MYSTERY ZILLION
မြန်မာ ပရိုဂရမ် များ
February 2009 edited October 2010 in VB6
မြန်မာ ဂဏန်းပေါင်းစက်(ဟာသ ပါ)
သီချင်းနားထောင်(ပထမဆုံး စလုပ်တဲ့ ဆော့ဖ်၀ဲ ပါ)
မြန်မာ စတုရင်(ဒီမှာကတစ်ခုပြောအုံးမယ် chess 1 မှာအယ်ယာပါတယ် ဘာလိုမှန်းမသိဘူး code ပါထည့်ပေးလိုက်တယ် ဖြေရှင်းကြည့်ပါ)
မြန်မာချက် ဆိုတာ ကျားထိုးတာကို ပြောတာလားဟင်။ ကျားထိုးတာဆိုရင်တော့ လိုချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကို သွားဒေါင်းတာ ကျွန်တော့်ကို မီဒီရာမီးတောက်က ဒီလိုပြောလွှတ်လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာကျား မဟုတ်ဘူးဗျ... ကျွန််တော်ကြည့်ကြည့်တာတော့ စစ်တုရင်(ချက်)ပဲဗျ..။ စမ်းကြည့်လို့ရအောင် ဒီမှာ ပြန်တင်ပေးထားတယ်။ ( linkက ၁ ပတ်ပဲ ခံမယ်ထင်တယ်နော် )။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒေါင်းပြီး ၅ ကွက်လောက်ပဲ ရွေ့ကြည့်ရသေးတယ်။ မအားလို့ ထပ်မဆော့ဖြစ်သေးဘူး။ ကိုအနော်ရထာကတော့ အဲရာ တစ်ခုပါတယ်လို့ ပြောတာဘဲ။ သားလဲ မသိဘူးနော်။ :P
sorry the file you requested is not available !
ပြန်တင်ပေးထားတဲ့ ဖိုင်လည်း (Sorry, the file you requested is not available. ) ဆိုပြီးပြနေပြီ
အရင် မီဒီယာ ဖိုင်းရား ကလည်း ဖိုင်ပျောက်နေပြီလို့ ပြောနေပြီ
ကျွန်တော် မှာ ကစားနည်း ရှိတယ်
စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်မှာ သွားရှာတာက ပိုမြန်မယ်ထင်တယ် စာအုပ်ကလည်း သိပ်များများစားစား ထွက်ဖူးတာမဟုတ်ဘူး နှစ်အုပ်လားရှိတယ်ထင်တာပဲ အသေချာဆုံးက အဟောင်းဆိုင်လူကိုသာ မေးကြည့်တာအကောင်းဆုံးပဲ
မြန်မာ့ကျား ကစားနည်းလေးပါ pdf လုပ်ထားပါတယ် https://docs.google.com/fileview?id=0BwKvJm_u3OQ8YjZhMjg3NmYtY2ZiZS00ZjQ1LWIxNTYtY2VlMTUwYzcxZDJm&hl=en
ဒါက မူရင် ဆိုဒ်ပါ http://pikay.myanmarbloggers.org/2008/12/blog-post_22.html
sevenlamp ရေ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်တုရင်program လေးကို mail ကနေ ပို.ပေးပါလား.....
ကိုယ်.mail က [email protected] ပါ ။
Go game ကို မကစားတော့ မကစားတတ်ဘူး။ ၀ါသနာပါသူတွေ ကစားကြည့်သင့်တယ်ထင်တာပဲ။ Eng ebook တွေလည်း ရှာလို့လွယ်ပါတယ်။ အပျင်းပြေကစားကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်။